Contributor, Columnist » အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရကြွယ်ဝလိုသော်(၉) – ဆရာမျိုးကျော်မြင့်	9
“I’m of two minds with regard to the recent events in Myanmar. I am happy to see students taking such an interest in education. At the same time, I’m very sad to see these students for having to fight for the rights toagood education.” ဒီနေရာမှာ of two minds ဆိုတာ ၀မ်းသာတာလား၊ ၀မ်းနည်းတာလား ဝေခွဲမရဖြစ်နေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်လေးတွေ ပညာကိုလိုလားတဲ့အတွက် ၀မ်းသာရမှာလား။ မြန်မာပြည်မှာ ပညာသင်ယူဖို့ ဒီလောက်တောင် အခက်အခဲတွေရှိနေတာကို ၀မ်းနည်းရမှာလား ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်နေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည်မှာ ယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေဟာ မဆန်းလှပါဘူး။
“It is fairly easy to understand if we put two and two together” ဒီနေရာမှာ to put two and two together ဆိုတာတခုခုကိုသဘောပေါက်သွားပြီလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ပညာရေးစနစ်ကြီးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ လျစ်လျှူရှုထားခဲ့တယ်။ ကျောင်းတွေ ခဏခဏပိတ်ထားခဲ့တယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအများကြီးနိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားရအောင်တွန်းအားတွေ ပေးခဲ့တယ်။ ဒီတော့ အခုပညာရေးအတွက်တစ်ကနေပြန်စရမှာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ” We are back to square one. We must start over again.” လို့သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ back to square one ဆိုတဲ့ idiom လေးဟာ အစကနေပြန်စရပြီလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့ကတော့ စာသင်တဲ့အလုပ်နဲ့ပဲ တသက်လုံးအသက်မွေးခဲ့ သူမို့ ” Putting students first is second nature to me” လို့ဆိုချင်မိတယ်။ second nature ဆိုတဲ့ idiom လေးကတော့ “အလွယ်တကူပဲ။ သဘာဝအလျောက်ပဲ” ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆရာတယောက်အတွက်ကတော့ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကိုဦးစားပေးလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအထူးမွေးမြူဖို့ မလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ second nature ကို ကောင်းကောင်းသုံးတတ်ဖို့ နောက်ထပ်ဥပမာလေးပြရမယ်ဆိုရင်
” Mg Mg seems to haveasixth sense when it comes to trouble. Every time the police or the soldiers come searching for him, he’s never home.” “မောင်မောင်ဟာ အန္တရာယ်ကို အလိုလိုသိတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ ရဲတွေ၊ စစ်သားတွေလာရှာတိုင်း သူအိမ်မှာ ဘယ်တော့မှ မရှိဘူး” လို့ဆိုလိုပါတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဒီတစ်ခါတော့ သူငယ်တန်းစာ မဟုတ်လို့ ဒီပို့စ်ထဲကနေ မျှစ်ကြော် ပြန်သင်ယူရတယ် သဂျီး။
ခင်ဇော် says: in seventh heaven နတ်ပြည် ခုနှစ်ထပ်မြောက် ပေါ့နော်။ ဟေးဟေး၊ အနော်တို့ နတ်ပြည်က ၆ ထပ်ပဲရှိတာ။ (ကိုယ်ပဲ တက်ဖူးသလိုလို)
Mr. MarGa says: second nature က အစားအ​သောက်တွေ အကဲဖြတ်​တာမဟုတ်​ဘူးလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: မင်း ငါ့ ကို နိပ်ကွတ်ဖို့ ဆို ပါးစပ်က ပြောတာ လွှတ်ကနဲပဲ။
Mr. MarGa says: ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး
Alinn Z says: ဒီတလအတွက် သင်ခန်းစာတော့ အခုမှ လေ့လာရတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 462
ကူမားရ် says: uk မှာတုန်းက စကားပြောရင် ခနခန ထည့်ပြောတာလေး တစ်ခုကြားဖူး တာက
ခင်ဇော် says: You’re one inamillion
kai says: ဒါပေမယ့်.. မြန်မာမှာ.. လေးသင်္ချောကမ္ဘာတသိန်း စောင့်ခဲ့ရသူရှိတယ်လို့.. ဟိန္ဒူတွေရိုက်သွင်း… သွင်း.. အဲ.. ဆိုကြသဗျ..။
အဲလိုကမ္ဘာပေါင်း… ၄သင်္ချေနဲ့.. တသိန်းတောင်…စွန်းလိုက်သေး.. စွန်းလိုက်သေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.